Fanafihan-jiolahy – Ambatondrazaka : raim-pianakaviana iray maty voatifitra, iray hafa voafira antsy | NewsMada
Fanafihan-jiolahy – Ambatondrazaka : raim-pianakaviana iray maty voatifitra, iray hafa voafira antsy
Taorian’ny vaky fonja tany Ambatondrazaka, ny asabotsy alina teo, nisehoana fanafihan-jiolahy nahafatesana olona any amin’ny fokontany Tanambao Ambohimasina, omaly alina, tokony ho tamin’ny 12 ora teo.
Araka ny vaovao voaray, tokantrano vao iray notafihana efa-dahy nirongo fitaovam-piadiana tamin’izany. Noteren’ireo jiolahy hanokatra ny varavarana ny mpiasa tao amin’ity trano ity. Raha vao nahare izany ny tompon-trano, nanokatra ny varavarana kanjo notifirin’ireo jiolahy avy hatrany. Maty tsy tra-drano ilay raim-pianakaviana vao 24 taona. Ity farany izay vao vita mariazy iray volana talohan’izao. Tsy vitan’izay, nofirain’ireo jiolahy ny zava-maranitra ilay mpiasa ka naratra mafy vokatr’izany. Nentina tany amin’ny hopitaly ity farany.
Araka ny fanazavana azo ihany, televiziona iray monja no lasan’ireo olon-dratsy. “Nihevitra izy ireo fa nisy volabe tao an-trano. Ny olona no novonoiny tsy nananany antra”, hoy ny filazan’ny olona avy any Ambatondrazaka. Nihevitra ny mponina fa ireo gadra nitsoaka sahady ireo namono olona ireo. Mbola eo am-panaovana fanadihadiana ny mpitandro filaminana.
Ahiana ho isan’ireo gadra nandositra…
Araka ny fanazavan’ny talem-paritry ny fandraharahana ny fonja any Ambatondrazaka, tsy mbola nisy vaovao momba ireo 11 lahy tafatsoaka ny fonja nitanana azy. Ny avy eo amin’ny zandarimaria kosa nilaza fa nisy lehilahy iray noahiahina ho anisan’ireo gadra nitsoaka tratra tany Ididy. Ny olona no nisambotra azy io, ka rehefa nosavaina, nahita dikana karapanondro hosoka tany aminy. Hoentina any Ambatondrazaka izy io hofantarina raha anisan’ireo gadra. Nilaza ny zandary fa efa eo am-pelatanan’izy ireo ny mombamomba ireo 11 lahy tafatsoaka ny fonjan’Ambatondrazaka. Mandeha ny fikarohana azy ireo, araka izany.
Yves S. sy Rarivo